Vaovao - Manao fanandramana PCR koa izahay, maninona no ratsy lavitra noho ny hafa hatrany ny valiny?
Ao amin'ny laboratoara, jereo ny PCR an'ny olon-kafa, avo ny fahombiazan'ny amplification, tonga lafatra ny electrophoresis strip, ary jereo ny azy manokana, sarotra atao mandritra ny fotoana maharitra, mahatsapa tena tsara ny valiny, vokatry ny fitsapana diso diso …… Inona ny olana?
Mino aho fa maro amin'ireo mpiara-miasa aminay ihany koa no efa nahita olana isan-karazany. Rehefa sendra rindrina amin'ny fanandramana PCR isika, dia handinika tsy misy saina ireo anton-javatra ao anatin'ny rafitra fanehoan-kevitra, fa matetika kosa isika tsy miraharaha ny fitaomana manan-danja amin'ny fanjifana amin'ny andrana.
Diso ny valin'ny PCR anao, ny PCR azo ampiasaina dia mety ho antony lehibe. Amin'ny lafiny iray, ny fandotoana mikraoba amin'ny fanjifana na ny fampidirana ireo mpanakana dia hiteraka fandotoana fanandramana; Etsy ankilany, ny fisafidianana tsy fampiasa tsy mety dia hampijaly ny valin'ny fanandramana ihany koa.
Tonga indray ny olana. Betsaka ny karazana fanjifana PCR, koa ahoana ny fomba hisafidianana izay mety hahatonga ny fanandramana ho malama kokoa? Inona avy ireo olana tokony hojerena? Aza manahy, anioI Miaraka amin'ny traikefa efa an-taonany maro, mamaha ireo olana mahazatra mahazatra mifantina ny PCR, manantena aho hanampy anao.
F1: Fa maninona ny PCR azo ampiasaina matetika vita amin'ny akora PP?
Huida: Satria matetika ny fifandraisana amin'ny PCR dia mifandray mivantana amin'ny reagents na santionany, ny fitaovana polypropylene (PP) dia tsy mihinana biolojika, tsy manaraka ny biomoleculars, ary manana fandeferana simika sy fandeferana amin'ny mari-pana (azo soratana amin'ny 121 ° C, mahazaka fiovan'ny mari-pana koa mandritra ny tsingerin'ny hafanana).
F2: Ahoana no tokony hisafidiko ny fantsona / takelaka PCR samihafa?
HUIDA: tanjon'ny fisafidianana: safidio ny vokatra mety mifanaraka amin'ny takiana fanandramana manokana. Ny ankabeazan'ny haben'ny fantsom-bokatra PCR dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny fiovan'ny PCR. Noho io antony io dia ampirisihina hisafidy ny fantsom-bokatra ambany aloha aloha. Satria ny fantsom-pifandraisana / takelaka ambany dia misy habaka kely eo amboniny, mihatsara ny fitarihana hafanana ary mihena ny etona. Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ny misoroka ny fanampiana santionany be loatra na kely loatra. Ny be loatra dia mety hitarika amin'ny fihenan'ny fitondran-tena mafana, ny fandosirana ary ny fandotoana ny hazo fijaliana, raha kely loatra kosa dia mety hiteraka fatiantoka ny etona.
Famaritana sy volan'ny fantsom-pifandraisana mahazatra:
Fantsona tokana / mitambatra: 0.5ml, 0.2ml, 0.15ml
96-lovia tsara: 0,2ml, 0,15ml
Loara tsara 384: 0.04ml
F3: Rehefa kely ny habetsahan'ny santionany dia hisafidy fantsona tokana na fantsona mitambatra aho, fa maninona ny sasany no manana fonony fisaka ary misy ny manarona convex?
Huida: Rehefa kely ny fatra santionany dia aleonao ny fantsona tokana na ilay fantsona mitambatra. Na izany aza, rehefa lehibe ny habetsahan'ny fanehoan-kevitra dia manjaka ny fantsona tokana ary mety hahatratra 0,5 mL ny habetsany. Ary ny fonony fisaronana sy ny fonony convex dia samy manana ny tombony azo avy aminy, manokana dia afaka manondro ireto fampahalalana manaraka ireto.
Fantsona tokana: 0.2ml sy 0,5ml; Afaka misafidy habetsahan'ny santionany mivaingana.
Fantsom-pifandraisana: 0.2ml na 0.15ml dia tsy voatery; 8 na 12 fantsona no mahazatra.
Sarona fisaka: afaka manome fampitana signal fluorescence marina ho an'ny qPCR; Mora manoratra marika.
Cover fonosana: fifandraisana amin'ny fonony mafana an'ny fitaovana PCR hampihenana ny fiovan'ny fantsom-pifandraisana vokatry ny tsindry; Na izany aza, hisy fiantraikany amin'ny fampitana signal fluorescence ary tsy azo ampiharina amin'ny andrana qPCR.
F4: Fa maninona no misy zipo ny PCR sasany fa ny sasany tsy manana?
Huida: Raha ny tena izy, ny zipo amin'ny takelaka PCR dia natao hifanaraka tsara amin'ny fampiharana mandeha ho azy, manome fanohanana azo antoka sy fiaretana mekanika ho an'ilay fitaovana, ary koa fitoniana avo kokoa mandritra ny fizotran'ny pipetting.
Ny takelaka PCR amin'ny ankapobeny dia mizara ho tsy hemline, antsasaky ny hemline ary hemline feno.
TSY Takelaka: Mety amin'ny ankamaroan'ny milina PCR na milina qPCR, fa tsy ho an'ny fampiharana mandeha ho azy. Ny fahamendrehana dia tsy avo amin'ny dingan'ny pipetting, noho izany mila ampiasaina miaraka amin'ny fanohanan'ny lovia izy.
Takelaka sisin'ny zipo: azo ampifanarahana amin'ny fampiharana mari-pamantarana na kaody bara, ary fampiharana mandeha ho azy, ary manana fitoniana pipetting tsara.
Takelaka zipo feno: mety tsara amin'ny fampiharana fanandramana mandeha ho azy, azo ampifanarahana amin'ny marika sy ny fampiharana kaody bara ihany koa. Izy io dia manana tanjaka mekanika tsara, azo ampiasaina amin'ny fitaovana PCR modely mibontsina, ary manana fitoniana avo lenta amin'ny fizotran'ny pipetting.
F5 :Ho an'ny takelaka PCR, maninona no tsy dia mitovy ny zoro sy ny marika?
Huida: Miankina amin'ny vokatry ny fanapahana zoro sy ny fanamarihana izany.
Fanapahana zoro: Ny safidin'ny toeran'ny fanapahana zoro amin'ny takelaka PCR dia miankina amin'ny fepetra takiana amin'ny fitaovana ilaina amin'ny fametrahana mora.
Famantarana: Ny mari-pahaizana alphanumerika amin'ny takelaka PCR dia manampy amin'ny famantarana ireo fantsakana tsirairay sy toerana misy santionany. Amin'ny ankapobeny ho an'ny sary famantarana nomerika miloko na sary sokitra. Ho an'ny fampiharana mandeha ho azy, ny takelaka fanehoan-kevitra vita pirinty sy voamarika dia voaisy tombo-kase tsara kokoa.
F6: Fa maninona ireo takelaka PCR sasany no miforitra raha ny hafa kosa fisaka? Iza no tsara kokoa?
Huida: Inona no mety indrindra. Misy karazany roa ny takelaka PCR iraisana: maridrefin'ny pore fisaka sy ny maridrefin'ny pore avo.
Takelaka fanehoan-kevitra amin'ny lavaka fisaka, mety amin'ny ankamaroan'ny fitaovana PCR.
Ny takelaka fanehoan-kevitra miaraka amin'ny sisin'ny orifice miakatra dia manamora ny famehezana ny membrane ary mampihena ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny santionany.
Huida dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny famokarana sy fanodinana ny vokatra PCR sy ny fenitra avo lenta amin'ny indostria. Manankarena ny tsipika vokatra ary afaka mamaly ny ankamaroan'ny fampiharana fanandramana PCR. Tongava ary mifidiana ny vokatra mety ho an'ny fampiharana andranao.